Hiika Gaa’elaa | Ejensii Galmeessaa Ragaa Bu`uura Hawaasummaa Oromiyaa
Hiikni gaa’elaa raawwate kan jedhamu gaa’elli armaan dura karaa seera qabeessa ta’een hundaa’ee ture tokko, akkaataa seera maatii Oromiyaa keeyyata 99 tiin karaa mana murtiitiin diigame yoo ta’edha.
1. Iddoo Itti Galmeessi Hiika Gaa’elaa Adeemsifamu
Iddoon galmeessa hiika gaa’elaa labsii lakkoofsa 760/2004 keeyyata 36 jalatti tumamee jiru akkuma eegametti ta’ee hiikini gaa’elaa bulchiinsa gandaa isa tessoon jireenyaa idilee wal hiiktotaa lamaanii ykn kan isaan lamaanii keessaa tokko argamutti ta’a.
2. Daangaa Yeroo Galmeessa Hiika Gaa’elaa
Hiikni Gaa’elaa raawwate tokko guyyoota 30 keessatti galmaa’uu qaba.
Hiikni Gaa’elaa raawwate tokko guyyoota 30 keessatti kan galmaa’e yoo ta’e “kan yeroon galmaa’e” jerdhama.
Hiikni Gaa’elaa raawwate tokko guyyoota guyyaa 30 hanga waggaa 1 gidduu jiran gidduutti kan galmaa’e yoo ta’e “kan ture galmaa’e” jedhama.
Gaa’elli raawwate tokko waggaa tokkoon booda kan galmaa’e yoo ta’e “kan daangaan yeroo galmeessaa irra taree galmaa’e” jedhama.
3. Haal- Dureewwan Galmeessa hiika Gaa’elaatti Guutamuu Qaban
Hiikni gaa’elaa kan raawwatame mana murtii teessoo jireenya idilee wal hiiktotaa ykn lamaan isaanii keessa tokkoo argamutti ta’uu qaba.
Galmeessisaa hiika gaa’elaa ta’ee kan dhiyaatu wal hiiktoota lamaan ykn wal hiiktota keessaa tokko ykn nama bakka bu’ummaa seeraa wal hiiktotaan kennameef ta’uu qaba.
Hiikinsi gaa’elichaa daangaa yeroo kennameef keessatti hin galmeeffamne yoo ta’e galmeessisan ragaa quubsaa ta’e dhiyeessuutu irra jiraata. Ragaa quubsaa kan jedhamanis haalota akka mana sirreessaa turuu, mana yaalaa fi kkf keessa turuu dha.
B. Ragaawwan Deggersaa.
Hiikni gaa’elaa mana murtiitiin raawwatamuu isaa kan ibsu waraabbin murtii mana murtii barreeffamaan dhiyaachuu qaba.
Galmeessisaan waraqaa eenyummaa jiraata ykn biyyoolessaa ykn paaspoortii ykn waraqaa eenyummaa raayyaa ittisaa yeroon irra hin darbiin ykn haaromfame dhiyeessuu qaba.
Galmeessistoonni baadiyyaa keessa jiraatan fi waraqaa eenyummaa hin qabne ragaa barreeffamaa jiraataa gandaa ta’uu isaanii ibsu ganda keessa jiraatan irraa kennamuuf dhiyeessuun galmeessisuu danda’u.
Hiikni gaa’elaa kan galmaa’u bakka bu’ummaan yoo ta’e, waraqaan ragaa addaa bakka bu’ummaa hiika gaa’elaa galmeessisuu dhiyaachuu qaba.
Armaan dura waraqaan ragaa gaa’elaa kennameera yoo ta’e, waraqaan ragaa gaa’elaa sun deebi’uu isaatiif ragaan dhiyaachuu qaba.
Galmeeffamtoonni daangaa yeroo galmeessaa dabarsanii dhiyaatan kan mana sirreessaa turan yoo ta’e ragaa mana sirreessaa turan irraa, kanneen mana yaala turan dhaabbata fayyaa ykn amantaa keessatti yaalamaa turan irraa akkasumas kan yaala aadaatiin gargaaramaa turan qaama yaala aadaa kennaafii ture fi kkf irraa ragaa sababa turaniif ibsu dhiyeessuu qabu.